Fanarenana ny Rova Efa vitan-dRavalomanana ny 70%-n’ny asa
Rovan’Antananarivo no harenina, hoy ny tale jeneralin’ny kolontsaina eo anivon’ny minisiteran’ny kolontsaina, Françis Razafiarison. Singa iray ao anatin’ny Rova toy ireo lapa maromaro ao ny lapan’i Manjakamiadana sy lapan’i Besakana fa tsy Rova ireo akory.
Ity lapa voalaza farany ity, raha ny fanazavany hatrany, amin’izao fotoana izao no efa mandeha ny fanarenana azy ary io no mila vitaina aloha satria anisan’ny ela indrindra izay nonenan’Andrianjaka ny taona 1610. Ny olana, hoy izy, dia ny tsy fisian’ny tolo-bidy na « appel d’offre » fa rehefa vita izay dia mitady ny mpandraharaha na « entrepreneur » hanao ny tohin’ny asa. Efa vita taorian’ny fahamaizan’ny Rova, izany hoe tamin’ny andron’ny fitondrana Ravalomanana, raha ny fanazavan’ity tompon’andraikitra ity hatrany ny 70%-n’ny fanarenana ny rovan’Antananarivo fa efa famaranana kosa no ataon’ny fitondrana ankehitriny. Toy ny hatramin’izay moa dia ho mozea hatrany ity rova ity rehefa vita.